Inona no tokony ho fantatsika momba ny PWM mitsilopilopy? - 💡💻 Iris - Blue Light Filter for Eye Fiarovana 🛌👀
Inona no tokony ho fantatsika momba ny PWM mitsilopilopy?
A haingana FAQ momba ny fanontaniana mahazatra momba ny PWM mitsilopilopy, satria indraindray dia mety tsy mazava amin'ny rehetra ny vaovao avy any.
Soraty ahy any ho any, raha ny fanontaniana tsy namaly fa Izaho no hamaly azy ary ampio ny valiny eto 🙂
Ve ny Monitor mitsilopilopy?
Ny ankamaroan 'ny fotoana eny. Izany dia miankina amin'ny ny Monitor na mampiasa PWM na DC dimming.
Misy mampiasa ny fitepon'ny fony mpanamboatra-sakany Fanovaovam-peo ny hifehy ny famirapiratry ny Monitor.
Inona no atao hoe Pulse-sakany Fanovaovam-peo?
Raha jerena ankapobeny mamadika ny LED amin'ny backlight ON sy NIALA.
Nahoana no salama?
Ny masonao manomboka ny fifanekena toy izao
Ary azonao maso aretina sy ny fanaintainana maso.
Ahoana no manamboatra izany?
Ataovy ny mpanara-maso ny famirapiratry ny mazava ny Hardware 100% mampiasa ny bokotra Monitor.
Mpanaramaso ny ankamaroan'ny tsy mampiasa indrindra PWM amin'ny mamirapiratra.
Inona no mitranga raha toa ny famirapiratry ny mazava dia nametraka ny 80%?
Mety mampiasa ny Monitor PWM
Inona no mitranga raha toa ny famirapiratry ny mazava dia nametraka ny 50%?
Inona no mitranga raha toa ny famirapiratry ny mazava dia nametraka ny 100%?
Ny Monitor angamba tsy mampiasa PWM ary tsy hahazo izany ON sy NIALA zavatra sy ny maso aretina.
tsy 100% famirapiratana salama?
Eny, raha ny efitrano jiro dia tena ambany dia ambany.
Fa tsara indrindra sy ny kely indrindra maso fiarovana maso habetsaky ny aretina sy ny fanaintainana maso, ny Monitor tsy tokony hijery fahazavana loharanom-baovao tao amin'ny efitrano.
Tokony mitovy ny famirapiratry ny efitrano fa tsy mitovy ny loharanom-baovao mazava.
100% famirapiratana amin'ny efitra maizina ratsy?
ary amin'ny 50% famirapiratana, Mba hahazo bebe kokoa maso fanaintainana?
Eny, raha mampiasa Monitor PWM.
Ary izay tokony hatao?
Iris dia afaka mifehy ny famirapiratry ny efijery tsy mampiasa PWM.
Tsy tiako izany, dia inona koa?
Mialà eo amin'ny fanazavana eny amin'ny efitrano rehetra ny fotoana sy mampiasa ny Monitor amin'ny mamirapiratra indrindra.
Aho, toy ny efitra maizina, dia inona koa?
Afaka mividy-baovao Monitor izay mitsilopilopy-maimaim-poana, na mampiasa Iris.
Noho izany dia tokony hampiasa indrindra Iris amin'ny mamirapiratra?
No, Iris famirapiratana dia salama sy tsy mampiasa PWM.
Azonao atao ny mampiasa na inona na inona zava-dehibe tianao amin'ny Iris, fa ny mpanara-maso ny famirapiratry ny mazava fitaovana avy amin'ny bokotra tsara ny ho amin'ny 100%.
Ny tena tsara, ampy amin'ny famirapiratana amin'ny Iris ny efitrano jiro.
Noho izany dia tsy afa-maso fanaintainana raha Iris dia nametraka ny 50% famirapiratana?
Ve aho, raha mahazo maso fanaintainana Iris dia nametraka ny 40% famirapiratana?
Ve aho, raha mahazo maso fanaintainana Iris no napetraka ho ambany mamirapiratra?
Raha ny efi-trano dia tena mamiratra sy ny mpanara-maso ny famirapiratry ny mazava dia maizina dia mety hahazo alahelo maso.
Miezaha mitovy ny efitrano jiro ny famirapiratry ny efijery.
Raha toa ny famirapiratry ny mazava dia nametraka ny 150% avy Iris no mahazo tsy mitsilopilopy?
Ho toy sarobidy hafa.
Iris tsy afaka manova ny fitaovana, fa afaka manala ny PWM mitsilopilopy, rehefa mifehy ny famirapiratry ny mazava.
Rehefa backlight Hz dia ambany kokoa ny maso misy aretina?
Eny, Manana fiatoana lehibe kokoa eo amin'ny ON sy NIALA sy ny masonao fifanarahana kokoa.
Eny, tena kely ianao na misy fiatoana tsy misy fiatoana fotsiny ao amin'ny mazava, ary ny masonao tsy fifanekena.
Inona no tanjontsika ho an'ny maso ara-pahasalamana?
Raha tsorina dia, ny tanjony dia ny manana hazavana foana ambaratonga izay tsy azo atao amin'ny LED, na ny ambony indrindra azo atao Hz tahan'ny amin'ny LED.
Ambany ny tahan'ny Hz dia toy ny mamadika ny lightbulb ao amin'ny efitrano ON sy daholo ny fotoana.
Tsy mitsilopilopy 0 Hz matetika?
No, antsointsika hoe mitsilopilopy izany ON sy NIALA.
Raha tsorina dia, in mpanaramaso, miezaka ho ny lehibe indrindra izay azo atao Hz ho an'ny maso ambany indrindra aretina.
Ao amin'ny E-ranomainty, ianao dia manana 0 Hz matetika fa ny teknolojia dia tsy mitovy.
0 Hz tsy mitsilopilopy fa tsy afaka ny hanana izany zavatra izany akory va hazavana loharano.
Afaka mahazo 0 Hz avy amin'ny boky na ny zavatra ara-batana toy ny vatolampy.
Misavoritaka ny saiko, ny hatao?
Ataovy fitaovana ny mpanara-maso ny famirapiratry ny mazava ho an'ny MAX avy amin'ny mpanara-maso sy mampiasa bokotra Iris hifehy ny famirapiratry ny mazava.
Tokony ho mpanaramaso hiala avokoa?
tsara, izany no vahaolana tsara indrindra saingy tena sarotra eo amin 'ny tontolon'ny teknolojia sy ny fitaovana elektronika avokoa.
tsara, samy avy electrically nandrara zavatra saingy tsy misy fifandraisana lehibe.
Ataovy izay rehetra mampiasa PWM Monitor?
No, Fa be dia be izy ireo, mpanaramaso ny hafa mampiasa zavatra antsoina hoe DC dimming.
Inona no atao hoe DC dimming?
Raha tokony mampiasa fiatoana fohy mba hifehy ny famirapiratry ny mazava toy izao
Ianao hanova ny DC toy izao
Ary izany no mahatonga ny mitsilopilopy.
Ary DC dimming tsy mitsilopilopy?
tsara, misy subpixel mitsilopilopy ary isan-karazany ny zavatra hafa, fa tsy mampiasa PWM hifehy ny famirapiratry ny mazava.
DC dimming dia tsara noho ny PWM.
Iris ve no mitovy amin'ny DC dimming?
Eny, fa Iris manova ny kely toy izany kosa DC dimming tsara kokoa.
Na izany aza, raha tsy te-handany vola be ho an'ny vaovao manara-maso sy te automatique Iris no tsara.
Ny hafa rehetra?
Andramo Iris for a couple of days and see if it helps you with eye pain and sleep problems.
Raha tsy afaka esory foana izany amin'ny 2 kitika.
Tale Jeneralin'ny Iris Technologies
Publishing daty: 15.05.2018
Posted in Articles, PWM